Dafcadii Ugu Horaysay Ee Dhamaysay Fasalka 12,aad Ee Dugsiga Hoyga Fiiq - Cakaara News
Dafcadii Ugu Horaysay Ee Dhamaysay Fasalka 12,aad Ee Dugsiga Hoyga Fiiq
Jigjiga(CN) Arbaco, 30ka September 2015, Xaflad si qurux badan loo soo agaasimay ayaa dulucdeedu ahayd mid lagu sagootinayay dafcadii ugu horaysay ee dhamaysatay fasalka 12,aadka ee dugsiga hoyga agoonta fiiq ayaa ka dhacday xarunta gobolka nogob ee magaalada fiiq. waxaana u kala hadhin xafladaasi masuuliyiinta gobolka kuwa degmada, masuuliyiinta iyo shaqaalaha dugsiga hoyga agoonta fiiq, saraakiisha sare ee ciidanka gaar ka ah ee ka hawlgala gobolka nogob iyo waliba marti sharaf kale.
Furitaankii xafladan ayaa waxaa ugu horayn ka hadlay maareeyaha dugsiga hoyga agoonta marwo Ubax Mursal Axmed oo sheegtay in ay maanta wax lagu farxo tahay ka dib dadaal dheer oo ay xukuumadu galisay ardayda ay waalidkood UBBO laysay in maanta la arko iyaga oo jaamacadaha waawayn ee dalka waxbarasho loogu kala dirayo kadib markii ay dhamaysteen waxbarashadoodii.
Waxaa kale oo kahadlay xafladaas gudoomiye kuxigeenka gobolka nogob ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka nogob mudane Dayib Axmed Nuur oo si qoto dheer uga waramay ahmiyada balaadhan ee ay dawladu galisay ardaydan taasi oo ay maanta wax lagu faano tahay in ay dafcadii ugu horaysay loo diro jaamacadaha dalka.
Dhankiisa gudoomiyaha degmada fiiq mudane C/qaadir Maxamed Xasan ayaa isna si mug leh ugu dhiirigaliyay ardaydan maanta u baxaysa jaamacadaha dalku in ayna marnaba moogaanin dadaalka culus ee ay xukuumadu galisay islamarkaana ay dadaal xoogan galiyaan waxbarashadooda ay ka soo baranayaan jaamacadaha.
Xafladan ayaa runtii ahmiyad gaar ah u leh xukuumada marka 1,aad maadaama oo ay dadaaladii ay ugashay caruurta waalidkood ubbo dishay aragtay midho dhalkoodii. waxaa kale oo ay iyana muhiimad wayn uleedahay caruurta dhamaysatay waxbarashadooda iyo shacab waynaha deegaanka oo si wayn ugu diirsaday.